Qoraalka Shell: In loo sameeyo fayl .desktop codsi la qaadan karo | Laga soo bilaabo Linux
Qoraalka Bash Shell: Abuur Xidhiidh App La Qaadan Karo.
Ereyga Shell ee loo adeegsado Nidaamyada Howlgalka waxaa loola jeedaa tarjumaha amarka ee Nidaamka Howlgalka. Guud ahaan, waa qaab hawleed sare oo qoraal ah oo isu muujiya qaab Terminal (Console) oo asal ahaan u adeega 3 meelood oo muhiim u ah shaqada: Maamulka Nidaamka Howlgalka, Ku shaqeynta codsiyada iyo la macaamilkooda, iyo u adeegida barnaamijka deegaanka aasaasiga ah. Qoraalku wuxuu loola jeedaa farsamada naqshadaynta iyo abuurista Qoraallada iyadoo la adeegsanayo Shell.
Qoraallada Shell waa kuwo aad waxtar u leh. Waa fikrad wanaagsan in la qoro baahiyahaas aan qabno ka dibna la saxo qoraallada shaqadan noo qabta. Xaaladdan gaarka ah waxaan u isticmaali doonnaa inaan ku abuurno xiriiriyeyaal dalabyo (toobiyeyaal) ah oo ku jira liiska bilowga iyo miisaska kumbuyuutarrada la qaadi karo, is-fulin kara iyo iskood-u-maamul.
2 Abuuritaanka barnaamijka adoo adeegsanaya Qoraalka Shell
4 Talo soo jeedin
Marar badan ayaan soo dejinnay oo aan rakibnay barnaamijyo, ku jira ama aan ku jirin meelaha lagu kaydiyo qaybteena 'GNU / Linux Distribution', marka la rakibayo ama la fulinayo, ma abuureyso feylasha .desktop-ka u gaarka ah. isku mid ah ama xaaladdii ugu wanaagsanayd ma dhigayso waddada saxda ah sidaa darteed markii la cusbooneysiiyo Start Menu-ka waa la akhriyaa oo lagu muujiyaa liiska xirmooyinka rakibay ee Nidaamka Howlgalka.
Sidaa darteed, waa inaan ka codsannaa adeegsiga barnaamijyada sida "Alacarte" ama "Menulibre" si gacan looga abuuro isku xirnaanta ku jirta Liiska Bilowga.
In kasta oo codsiyadaas garaafka ah ay aad u fudud yihiin in loo isticmaalo ujeedkan, haddana waligeed aad uma badna in la ogaado Abuuritaanka qoraal noo gaar ah oo aan ku fulino qalliinkan sidaasna ku ogaano gudaheeda sida qalliinka loogu sameeyo gudaha Nidaamka Howlgalka.
Haddii aadan aqoon u lahayn abuurista iyo / ama isticmaalka feylasha Qoraalka Shell waad awoodaa aqriso tan qoraal hore (Shell, Bash iyo Scripts) si loo bilaabo ka dibna haddii loo baahdo in la baaro dhammaan qoraalada ku saabsan mowduuca.
Abuuritaanka barnaamijka adoo adeegsanaya Qoraalka Shell
Waxaan u qaadaneynaa sababaha boos ee aan horey u ognahay sida loo abuuro qoraal laga soo bilaabo xoqida, taasi waa, waxaan horey u ogaanay sida loo abuuro cinwaanka ama qeybaha hore ee qoraalkeena oo waxaan si toos ah ugu tagi doonaa waxa ku jira.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad wax shaki ah ka qabtid, hubi tan qoraalkii hore (Ubari barnaamijkaaga talaabo talaabo adoo adeegsanaya Qoraalka Shell - Qeybta 1) si loo cadeeyo shakiga.
Wax ku qor qoraalka Mousepad
Maaddaama aad ka falanqeyn kartid lambarka oo aad ka tagi kartid cinwaanka, qoraalka soo socda wuxuu u qabanayaa hawlgallada soo socda qaab otomaatig ah:
Xaqiiji in laguu adeegsanayo xidid adeegsi sare ama rukhsad xiddig super user ah.
Tirtir xiriirinnadii hore ee arjiga ee lagu abuuray nooc hore.
Abuur feylka .desktop-ka cusub (iskuxiraha) arjiga faylkiisa gudaha guriyaha isticmaalaha.
Ku wareeji rukhsad mulkiilaha isticmaalaha faylka la abuuray.
Sii feylka la abuuray akhriska / qorista / fulinta rukhsadaha ku habboon.
Abuur xiriiriyeyaal cusub oo astaan ​​u ah waddooyinka lagama maarmaanka ah.
Cusbooneysii liiska bilawga si aad u muujiso faylka la abuuray .desktop.
Ku ful URL gaar ah arjiga la abuuray.
Waxaa lagugula talinayaa in feylkaan lagu dhex abuuro galka uu kujiro arjiga / fulin karo su'aasha astaamaheeda (sawirka / astaanta) lagu qeexay dhexdeeda isla markaana keydka galka ah wuxuu kujiraa dariiqa /opt halkii laga mari lahaa wadada `echo $HOME`/mi_app/ taas oo ah, /home/mi_usuario/mi_app.
Waxaan rajeynayaa in qoraalkan yar uu kuu ogolaanayo inaad ku xalliso baahiyahaaga arrintan la xiriira mowduucaan! Ilaa maqaalka soo socda.
Inta aan kaaga tagayo tan xiriiri websaydhka rasmiga ah ee Gnome ee ku saabsan mawduuca iyo fiidiyowgan:
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Qoraalka Shell si loo abuuro feyl .desktop ah oo loogu talagalay codsi la qaadan karo
Aad baad ugu mahadsantahay tan iyo dhamaan qoraaladaada.
Su'aal: Sidee, haddii aadan xidid ahayn, miyaad weydiisan kartaa lambarka sirta ah ee muujinaya xiddigood si uu u sii wado fulinta rukhsadaha ku habboon?
Waad abuuri kartaa isdhexgal wada hadal ah oo aad codsan kartaa hantida sirta furaha sanduuqa codsiga lambarka sirta ah! Waxaan si fiican u xasuustaa in hantidan ay ku jirto wadahadal.
Qoraalkan hore, qof ayaa sameeyay wax la mid ah laakiin garaaf ahaan laakiin faylasha ku lifaaqan, taasi waa, koodhkii la adeegsaday mar dambe lama heli karo: https://blog.desdelinux.net/script-avanzado-en-bash-bashmd5-para-proteger-algo-explicacion-detallada/
Mahadsanidiin, way fiicnaan laheyd inaadan ka tagin deegaanka bash haddii ay dhacdo inuu socdo iyada oo aan la helin qaab muuqaal ah, haddii ay sidaas dhacdo wax macno ah ma sameynayaan xitaa haddii aysan jirin xiddig ama wax astaan ​​ah, inay weydiisato furaha oo aan wax qoraal ah ka muuqan. Ummm, waxaan ka helayaa http://www.tormentadebits.com/2012/08/scripts-bash-introducir-password-sin-mostrarlo-en-pantalla.html
Sidee loo rakibaa Wordpress Ubuntu 18.04 iyo derivatives?